I-Nickel Alloys, iiCobalt zeAlloys, iiMveliso zeSinyithi zentsimbi ezingenanto ezingenanto - iSekonic Metals Technology Co., Ltd.
Welding Wire & Intonga
Velisa kwaye unikeze iiNickel alloys Welding, Cobalt based alloys welding wire and Rods
I-Nickel alloy welding electrode, i-Cobalt alloy kunye ne-stainless steel electorde ziyafumaneka.
Ubushushu obuphezulu beAluminiyam ene-Ni-based kunye ne-Stellise serises Powder ekhoyo kwinkampani yethu
• Isetyenziselwa i-welding ye-nickel alloy, i-carbon steel, i-stainless steel kunye ne-alloy yensimbi ephantsi, esetyenziselwa ukuwelda kwe-625, 601, 802 alloys kunye ne-9% ye-nickel alloys
• Isetyenziselwa ukuwelda i-nickel-iron-chromium-molybdenum-copper alloy (ASTM B 423 enenombolo ye-UNS N08825) kuyo kusetyenziswa iinkqubo ze-GTAW kunye ne-GMAW
• Isetyenziselwa ukuwelda i-nickel-chromium-molybdenum alloy C276 uqobo, okanye i-welding nickel-chromium-molybdenum alloy kunye nentsimbi kunye nezinye izinto ezininzi ezisekwe kwi-nickel
»Umzimveliso aluminiyamu iwelding wire & I-electrode«
I-Nickel kunye ne-nickel alloy electrode zingahlulwa ngokweendidi ezintlanu, ezizeze-Ni esulungekileyo kumzi-mveliso, Ni-Cu, Ni-Cr-Fe, Ni-Mo naseNi-Cr-Mo. Icandelo ngalinye linokwahlulahlulwa lube luhlobo olunye okanye nangaphezulu kwee-electrode. Olu hlobo lwe-electrode lusetyenziselwa ikakhulu i-welding nickel okanye i-high-nickel alloys, kwaye ngamanye amaxesha ikwasetyenziselwa ukuwelda okanye ukujonga izinyithi ezingafaniyo.
• Isetyenziselwa ii-alloys ze-718, 706 kunye ne-X-750 ezisetyenziselwa ukuqinisa amandla aphezulu eenqwelomoya kunye nezinto zerokethi ezingamanzi ezibandakanya amaqondo obushushu e-cryogenic.
• Isetyenziselwe ii-alloys ze-nickel-chromium-iron kunye neMigangatho ye-ASTM B163, ASTMB 166, ASTM B167 kunye ne-ASTM B168 efana ne-alloy 600, 601 kunye ne-800 kunye nokudibanisa i-steels engafaniyo phakathi kwentsimbi engenasici kunye ne-carbon steel ERNiCrFe-7
• Isetyenziselwa i-alloy nickel-alloy alloy (ASTM B 127, B 163, B 164, kunye ne-B 165 enenombolo ye-UNS N04400) yona isebenzisa iinkqubo ze-GTAW, GMAW, SAW, kunye ne-PAW. Ucingo lwe-welding luqukethe i-titanium eyaneleyo yokulawula i-porosity ngezi nkqubo zewelding.
Iimveliso zeSekonic eziphambili zeMveliso kunye nokuNikezelwa kwezixhobo zeWelding
Isitayile 6/12/25 Iyasebenza
Isitayile 6, Yenza ingxubevange R26 evulwa, IHaynes 25 Intambo, Isitayile 6B, Ucingo lweWelding, iringi yesitayile,